Hiakatra fitsarana, anio: vola vahiny iray kontenera simban’ny merkiora | NewsMada
Hiakatra fitsarana, anio: vola vahiny iray kontenera simban’ny merkiora
Hiakatra fitsarana, anio ny momba ilay “Raharaham-bola vahiny iray kaontenera”, simba noho ny merkiora. Anisan’ny tompon’antoka amin’izany ny vehivavy roa nisoloky sy nivadi-pitokisana amin’ireo nanampy sy niara-niasa tamin’izy ireo. Nahalafo merkiora nahazoana vola vahiny iray kaontenera izy ireo. Notahirizina tao an-trano izany niaraka amin’ny ambin’ny merkiora tsy lafo. Nivadika sy simba anefa ireo volabe ireo noho io akora io niray toerana taminy. Voatery nitady teknisianina mahay manadio izany ireo tompom-bola mba hanadiovana sy hamerenana amin’ny laoniny indray ireo vola simba ireo. Lafo be anefa ny vidin’ny tavoahangy iray amin’ny akora fanadiovana satria mitentina 20 tapitrisa Ar izany. Nikaroka mpamatsy vola maromaro ireo vehivavy ireo mba hahafahana manadio izany ary homena amin’io vola io ireo mpiara-miasa ireo rehefa voadio izany, miaraka amin’ny zana-bola. Nividianana akora nanadiovana ilay vola izany fiaraha-miasa izany. Tsy araka izany anefa ny nitranga fa tsy nety tafaverina amin’ireo nampindrana izany vola izany. Nidiran-trosa mihitsy aza ny sasany.
Fisolokiana sy fivadiham-pitokisana
Tao koa ireo nametraka fitoriana noho ny fisolokiana sy fivadiham-pitokisana. Nanitrikitrika rahateo ireo vehivavy roa ireo fa diovina avokoa ireo vola vao homena ny anjarany ireo namatsy vola. Tsy vitan’izany fa tsy maintsy mbola hanaovana “fombafomba” koa izany. Izany hoe nilalao fotoana koa ireto vehivavy ireto ary nisy fotoana aza nambara fa tsy salama na narary saina mihitsy izy ireo. Tao anatin’izany rehetra izany, nanjavona ny antontan-taratasy momba io raharaha io na koa tsy nisy tohiny. Tsy nisy ny fampidirana am-ponja vonjimaika na fihazonana ireo vehivavy roa ireo fa vitavita ho azy teny hatrany ny raharaha.
Manoloana izany rehetra izany, andrasana anio indray ny ho tohiny, rehefa nifandrirarira sy tsy nahitam-bokany nandritra ny fotoana maro ny fitoriana sy ny fitarainan’ireo namatsy vola ireto vehivavy roa ireto.